Mujaahidiinta Al-Shabaab oo mar kale si buuxda ula wareegay gacan ku heynta Degmada Xudur. | JILYAALE_ONLINE
Mujaahidiinta Al-Shabaab oo mar kale si buuxda ula wareegay gacan ku heynta Degmada Xudur.
Mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa saakay si buuxda ula wareegay gacan ku haynta Magaalada Xudur ee Xarunta Gobolka Bakool, iyada oo Maamulkii dowladda KMG uga wakiilka ahaana isaga baxeen.
Ilo wareedyo lagu kalsoonyahay ayaa sheegaya in Maamulkii dowladda KMG u qaabilsanaa magaalada Xudur ay u baxsadeen dhinaca Magaalada Baydhabo oo ah Magaalada kaliya ee Gobolka Baay ay ku harsanyihiin ciidamada Gumeysiga Ethiopia iyo kuwa la shaqeeya.
Mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa la sheegay in ay dageen Saldhiga Booliiska iyaga oo sidoo kale galay xarumihii Maamulka dowladda KMG ah ay halkaasi ku lahaayeen.
Dadka deegaanka ayaa sheegay in ay Mujaahidiinta Al-Shabaab halkaasi qabsadeen iyadoo aan lagala hor’imaan wax dagaal ah.
Ma aha markii ugu horeysay oo ay Al-shabaab gacanta ku dhigaan magaalooyin ka mid ah gobolada dalka Soomaaliya gaar ahaan Gobolka Baay iyo Bakool, lamana sheegi karo hadda in ay ku sii nagaanayaan iyo in kale.
← Salaad Cali Jeelle oo sheegay in uusan wax dembi ah kagelin Shacabka Soomaaliyeed xilligii uu ahaa..
RW. Nuur Cade:- “Furaha kaliya ee Nabad waarta lagu gaari karo waa dib u heshiisiinta, meel wanaagsan ayayna mareysaa”. →